Weligaa hakala dooran labo kala daran, ee Raadi mid kawanaagsan
Tan iyo markii ay dooda nidaamka awood qeybsiga Soomaaliya ee xiigsiga 2016 bilaabatey ilaa iyo hada kama aan hadlin arimahan, laakinse shaqsiyaal asxaab nahay ayaa wax badan iga weydiyen sida an arko iyo tan aniga taageeri ama qaadan lahaa nidaamka qabiiliga 4.5 ama gobol iyo deegaan wax lagu qeebsado. Anigo kagaabsanaayo kudeg dega jawaabta ayaan asxaabteyda ku iri jirey in an hubinaayey waxaa shirka Kismaayo kasoo bixi doono.
Shirarka Muqdisho iyo Kismayo waxaa isku imaaden ama wada doodaayey afar beelood (4.0), waxaana si gaar ah doodda xoogeeda udhexeysey labo beelood,(REER QURAC iyo REER QANSAX). qolo waxay leedahay nidaamka 4.5 wax halagu qeybsaddo kuwana gobol iyo deegaan.
Waxaa igu su’aal ah, beelaha soomaaliya degan afar beelood keliya miyey kakoobanyahin.. ame way kabadanyihin intas?
Sidaa xaqiiqda ah labada shir logu dooddayey xiigsiga 2016ka waxaa kusoo dhamaaden ismari waa iyo fashil ba’an. Hora soomaali utiri “labo xaq daro kuheshisey, xaq Kuma heshin doona.”
Labada beelood REER QURAC iyo REER QANSAX mid waxaay aminsanyihin in deeg ahan uga badanyihin degan ahaan beelaha kale, kuwa kalena aminsanyihin in dad ahan (population/demographic) ahan kubadanyahin beelaha kale. Soomaalidu waxay caado u leedahay in Magaalo ama deegaan hal reer isaga magacaabaan iyagoon wax caddeyn ah u hayn sida tirakoob iyo Waxyaabaha lamidka ah. Waxaa laga yabaa reerka lagu magacaabey deegankas ama magaaladas in ay yihiin 30% ama ay kayaryihin. Cid isweydineyso malaha “beelaha” deeganka degaan iyo sida ay uga kala badanyihin. Aqoonyahada Siyaasiyinta iyo suxufiyinta REER QURAC iyo REER QANSAX waxaa baryahan dambe hawada iyo saxaafada isu marinaayeen maqaalo kukala taageersanyihin labada qodob “4.5 iyo Deegan.”
Aniga kashaqsiya iyo siyaasad ahaan waxaan aamin sanahay in “4.5 iyo Deegan” wax kuqeebsi labbaduba xaraan yihiin oo lagu doonaayo cadaalad daro, sadbursi xagga awood qeybsiga, eex iyo qabyaalad lagula kacaayo beelaha loogu yeerey “0.5”(nus). Sadbursigan soo jireen ah weli wuu jiri doona ilaa iyo sheegashadda deegan iyo dad badnaan aan xaqiiqda loo hayn lagu gudbo. Waxaa keliya loga gudbi kara ilaa la hello nidaam dimoqraadi oo “Hal Cod iyo Hal-Qof” ah. Soomaaliya cadaalad iyo nabad waarta laheli mayo ilaa ay katowbadkeenan dulmiga isku heyso.
Somalis’ Ethnocentric Supremacism=4.0 vs 0.5 (4.5)
Orientalism and its Importance to Study